एमाले र माओबादीको एकता असाधारण र बहुआयामिक – अध्यक्ष दाहाल | suryakhabar.com
Home राजनीति एमाले र माओबादीको एकता असाधारण र बहुआयामिक – अध्यक्ष दाहाल
एमाले र माओबादीको एकता असाधारण र बहुआयामिक – अध्यक्ष दाहाल
on: १३ जेष्ठ २०७५, आईतवार १८:२४ In: राजनीतिTags: एमाले र माओबादीको एकता असाधारण र बहुआयामिक – अध्यक्ष दाहालNo Comments
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता असाधारण र बहुआयामिक भएको बताएका छन् ।
प्रेस सेन्टर नेपाल र प्रेस चौतारी नेपालले कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को स्मरणमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकता मुलुक निर्माणका लागि जनअपेक्षित परिघटना भए पनि चुनौती उस्तै रहेको बताए ।
देश र जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नका लागि आफूहरुले एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाएको भन्दै उनले एकताबाट देशभित्र र बाहिर पनि नयाँ आशा र विश्वासको सञ्चार पैदा भएको बताए ।
मुलुकलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउने र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु यतिखेरको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले भने, “जनताको अपेक्षा पूरा गराउने ठूलो चुनौती रहेको छ । त्यो चुनौती पूरा गर्न हामीले ठूलो मेहनत गर्नु गर्नु जरुरी छ । सामान्य तरिकाले अगाडि बढेर हुनेवाला छैन ।”
आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समेत साथै लिएर जाने अभियानमा आफूहरु रहेको उनको भनाइ छ ।
एकताका क्रममा केहीले केन्द्रीय समितिमा स्थान नपाएकामा चिन्ता गरेको प्रसंग जोड्दै उनले भने, “एकताका क्रममा केहीलाई केन्द्रीय समितिमा परिन कि भन्ने चिन्ता पनि होला”, अध्यक्ष दाहालले भने, “देश बनाउने महान् अभियान शुरु भएको छ । आज नपरेर के भो त ? भोलि अवश्य परिहाल्छन् । कुनै न कुनै जिम्मेवारी पार्टीले दिन्छ । दिएको जिम्मेवारीको इमान्दारीताका साथ पालना गर्नुस् ।”
उन सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिएर एकीकृतरुपमा राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित हुने आफूहरुको सदिच्छा रहेको बताए ।
फरक एक प्रसंगमा अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा निरन्तर लडेको पार्टीको हैसियतले आफूहरु नै सच्चा लोकतन्त्रवादी र स्वतन्त्र प्रेसको पक्षधर रहेको बताए ।
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हक हितका लागि आफूहरुले सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने र जनताको सूचनाप्राप्त गर्ने अधिकारलाई सम्मान गरिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।
परिवर्तनको रक्षा गर्ने र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उनले प्रमुख प्रतिपक्षप्रति संकेत गर्दै भने, “रिस र आवेगले केही हुनेवाला छैन । नेपाली काँग्रेस हाम्रो सहयात्री नै हो, तर दुईवटा पार्टी मिल्यो भनेर रिस गर्ने र आवेगले काम गर्नु जरुरी छैन । त्यसले कोही कसैको हित गर्दैन ।”
उनले मधेश केन्द्रित र अन्य वामपन्थी शक्तिलाई मिलाएर जाने प्रयासमा आफूहरु रहेको र केही दिनभित्रै सकारात्मक परिणाम निस्कने जानकारी दिए ।
अध्यक्ष दाहालले कृष्ण सेन इच्छुक, त्याग र समर्पणको प्रतिमूर्ति रहनु भएको भन्दै उनले देखाएको मार्गमा निरन्तर अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।
प्रेस स्वतन्त्रतामा तलमाथि हुन्न– राज्यमन्त्री बाँस्कोटा
सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्द हुन नहुने बताए । उनले भने, “प्रेस स्वतन्त्र रहन्छ, स्वच्छन्द रहँदैन । कोही कसैले पनि शंका नगर्दा हुन्छ ।
राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिता गरेकै आधारमा अब कोही पनि कृष्ण सेन जस्तो हुनु नपर्ने र पत्रकारिता गरेकै आधारमा जेल जानु नपर्ने उल्लेख गरे । तर प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्द रहने प्रवृत्तिलाई भने स्वीकार गर्न नसकिने राज्यमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । उनले लोकतन्त्र कोही कसैले ल्याइदिएको नभई आफूहरु लडेर ल्याएको व्यवस्था भएकाले अनावश्यक आशंका गर्नु जरुरी नरहेको स्पष्ट पारे ।
वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हितका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको उनको कथन थियो । राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले भने, “पत्रकार भन्दैमा राज्यको नियम कानून मान्नु पर्दैन । जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? सामाजिक दायित्व र सीमा हुँदैन ।” उनले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारले दुःख पाउनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ भने ।
नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले यो वा त्यो बाहानामा काम गर्न सकिन भन्ने छुट नपाउने स्पष्ट पारे । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले जनतामा नयाँ उभार पैदा भएको भन्दै जनअपेक्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सरकारमा रहेको दलका नाताले आफूहरु जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने भन्दै प्रतिपक्षले अनावश्यक आशंका गर्नुु जरुरी नभएकामा जोड दिए ।
सेन स्मृति पुरस्कार मैनालीलाई
प्रेस सेन्टर नेपालले स्थापना गरेको कृष्ण सेन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता एवं पत्रकार रघु मैनालीलाई प्रदान गरिएको छ । रु २५ हजार राशिको सो पुरस्कार नेकपाका अध्यक्ष दाहालले आज प्रदान गर्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियोका माध्यमबाट आम जनताको जीवनस्तर सुधार्न र उनीहरुमा सूचनाको पहुँच पु¥याउन गर्नुभएको योगदानको चर्चा गर्दै सो पुरस्कार प्रदान गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
Tags: एमाले र माओबादीको एकता असाधारण र बहुआयामिक – अध्यक्ष दाहाल
NHRC observes 18th anniversary
१३ जेष्ठ २०७५, आईतवार १८:२४